Khabar Chitwan || प्रेम सिंह निको भए
भरतपुर, २३ पुस ।
काकाको बारी जोत्दा गोरुले लात्ती हानेर भाँचिएको विकट जाजरकोटका टुहुरो प्रेम सिंह पूर्णतया निको भएका छन् ।
भाँचिएको हात काम्रो बाँधेर एक महिनासम्म गाउँमै बसेका उनलाई सामाजिक संस्था ‘हामीले नगरे कसले गर्ने ?’ को पहलमा भरतपुरसम्म ल्याएर उपचार गरिएको हो । उनको पूरै उपचार निःशुल्क गरिदिएको भरतपुरको एलाइभ हस्पिटलका प्रमुख डा. प्रमोद लामिछानेले प्रेम पूर्णतया निको भएको जानकारी दिए ।
“करिब दुई महिनाको उपचारपछि उनको हात पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ”, डा. लामिछानेले भने, “अब उनी पहिलेजत्तिकै स्वस्थ छन् ।”
संस्थाले जाजरकोटबाट भरतपुरसम्म ल्याएपछि डा. लामिछानेले त्यसपछिका सबै खर्च मिनाहा गरेर पूरै उपचार गरिदिएका थिए । हाल प्रेम भरतपुरस्थित एसोएस बालग्रामको संरक्षणमा छ । उनले त्यहाँ आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गरेका छन् । १२ वर्षीय प्रेमको बाबुआमा दुवै छैनन् । उनलाई भरतपुरसम्म उनको भिनाजुले ल्याएका थिए ।
हामीले नगरे कसले गर्ने ? संस्थाका अभियान्ता दिपेन्द्र अधिकारीले प्रेमको पढाइ राम्रो भएको र एसोएसको सहयोगले उनको सुन्दर भविष्य निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।